Soo -saareyaasha Soo -saarista Barkiga Block -ka,
Barkimada Block Barkhad
Performance Waxqabadka asaasiga ah waa inuu la mid yahay kan kaarka qotada dheer ee jeexdin.
Amount Qaddarka habboon ee wakiilka cadaadiska, looma baahna in la nadiifiyo ka hor rakibidda, looma baahna in cadaadis lagu daro.
● Lagu dabaqi karo waqtiyada u baahan qalab fudud iyo qaybo, sida mashiinnada beeraha, hababka gaadiidka ama mishiinnada dhismaha.
Gelitaanka taxanaha oo leh UCP 200 oo sax ah
Structure Qaab dhismeedka isku dhafan, oo si sahlan loo rakibi karo.
Ring Giraan gudaha ah oo ballaadhan: oo ku habboon qufulka xidhitaanka, si fiican u adag.
Wire Siligga ugu sarreeya: laba fiilo oo sare leh oo leh Xagasha 120 digrii oo ku yaal giraanta gudaha si loo hubiyo in si dhib yar loogu xirayo mashiinka.
Ring Giraanta haynta: waxaa jira mid labada dhinac ah, oo si wax ku ool ah u xannibaya boorka.
● Xir caagga cinjirka: waxaa lagu rakibay gudaha gudaha siddooyinkii hayaha labada dhinacba si.
Gelitaan tayo sare leh oo leh UCP X00
Guryaha taxanaha ah ee sita UCP300
Soo -saareha kubbadda guluubka guluubka leh ee leh UCF
Raad -goobeed dibadeed oo leh kursi waa unug sita kaas oo isku daraya kursiga duudduuban iyo sidiisa. Inta badan xayndaabka goobaabin ee dibedda ayaa ah dhexroorka dibedda ee aagga, iyo iyada oo la wada rakibay daloolka daloolka gudaha ee gudaha, qaabka qaab -dhismeedku waa kala duwan yahay, caalami iyo is -weydaarsi wanaagsan.
Gelinta qiimaha tartanka ee leh UCFX00
Cabbirradu waxay u dhexeeyaan UCF200 iyo UCF300, ma aha kuwo aad u yar, halbeegga tallaabada gaarka ah iyo naqshadayntu waa isku mid, waa farqiga cabbirka, haddii aan lahayn shuruudaha xarunta dhaadheer, badiyaa wuu beddeli karaa.
XRL astaanta barkinta sare ee saxda ah ee sita UCFC
Dusha salka waxaa la siiyaa taliye wareegsan, kaas oo lagu ridi karo daloolka wareegsan ee hayayaashii, sidaa darteed saxsanaanta rakibidda ayaa sarreysa meelayntuna waa sax.
Lug -sita luguhu waa badeeco sidata oo ka kooban xambaarid, lug -xambaar leh lugeed iyo lug -gooyo leh lug -gooyo dusha koreysa.
Galinta birta aan lahayn ahaanshaha sita UCFL 200
Qaab -dhismeedku waa mid fudud oo si sahlan loo rakibi karo, oo ku habboon aag yar oo ka mid ah qaybaha gudbinta. Masaafada dhexe ee labada dalool ee boolku waxay la jaanqaadayaan masaafada dhexe ee kursiga laba jibbaaran ee daloolada daloolada dadab ee isku nooc ah.
Codsiyada ugu waaweyn ee UCFL: rakibidda cabbirka masaafada yar ee mashiinnada, gudbiyaha rullaluuqa, mashiinnada cuntada, mashiinnada dawooyinka, iwm.
XRL brand shiinaha caan sita UCFL X00
Qaab -dhismeedku waa mid fudud oo si sahlan loo rakibi karo, oo ku habboon aag yar oo ka mid ah qaybaha gudbinta. Masaafada dhexe ee labada dalool ee boolku waxay la jaanqaadayaan masaafada dhexe ee kursiga afar geeslaha ah ee godadka boodhka dadab ee isku nooc ah
Codsiyada ugu waaweyn ee UCFL: rakibidda cabbirka masaafada yar ee mashiinnada, gudbiyaha rullaluistemadka, mashiinnada cuntada, mashiinnada dawooyinka, iwm
Qiimaha tartanka ee gelinta tayo sare leh oo sita UCFL 300
Calaamadaha gelinta nooca XRL UCT200
Boodh -ku -dhejiska ayaa ku habboon codsiyada u baahan hagaajinta usheeda dhexe iyo aaladaha xiisadda suunka, sida codsiyada gudbiyaha. Waxay leedahay laba qaab: kursi silbadda birta ah ee birta lagu shubay iyo kursi sagxadda biraha oo shaabadaysan; Foom kasta wuxuu leeyahay nidaamyo quful oo kala duwan oo uu ka doorto. Biraha simbiriirixan ee kabka birta ayaa ku habboon codsiyada culeyska caadiga ah; Xayiraadda sagxadda birta wanku waxay ku habboon tahay codsiyada culeyska dhaqaale iyo fudud.
Gelinta xannibaadda UCT300